Fanoherana ny Tana-Masoandro :: Mbola tsy mahatsiaro tena ilay zandary | Hihamafy ny hetsik’ireo mponina • AoRaha
Fanoherana ny Tana-Masoandro Mbola tsy mahatsiaro tena ilay zandary | Hihamafy ny hetsik’ireo mponina
Efatra amby roapolo ora taorian’ny hetsika naharatrana olona sy zandary teny ambohitrimanjaka, mbola miady amin’ny fahafatesana ilay zandary nodarohan’ireo andian’olona. Naneho ny tsy fankasitrahany izany ireo fikambanana mpiaro ny zon’olombelona sy filohana andrimpanjakana iray miampy ireo rafi-panjakana. Milaza ny mbola hanohy ny tolona ary hanambatra ny heriny ireo kaominina efatra voakasika.
Mbola voatazona manaraka fitsa­boana eny amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) Ampefiloha, hatra­min’ny omaly, ny iray tamin’ ireo zandary dimy, naratra nandritra ny fifandonana teo amin’izy ireo sy ny andian’ olona marobe, teny Ambohi­trimanjaka, afak’omaly alina. Voa mafy io zandary io. Voalaza fa ahiana ny ainy noho ireo ratra mafy nahazo azy.
«Faritra maro teny amin’ ny vatan’ilay zandary no voa, toy ny lohany, ny tratrany, ny tongony. Nandalo fandidiana izy, vantany vao tonga teto amin’ny hopitaly tamin’iny alina iny. Mbola ao amin’ny trano fameloman’aina ilay zandary, amin’izao fotoana izao (Ndrl : omaly tolakandro », hoy ny profesora Rakoto Alson Olivat, talen’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona.
Olona enina no naratra, tamin’iny fifandonana teny Ambohitrimanjaka iny. Zandary dimy sy sivily iray. Itsy farany izay voalaza fa voa tamin’ny tongony ka tsy maintsy niatri­ka fandidiana. Mitohy ny fitsaboana azy eny amin’ny hopitaly. Nalefa nody kosa, rehefa avy nozahana tamin’io alina io ihany, ny zandary efatra.
Ankoatra ireo, fantatra fa mbola voatazona ao amin’ny zandary eny amin’ny Sampana misahana ny heloka bevava, eny Fiadanana, ireo olona sivy voasambotra. «Lehilahy avokoa izy ireo izay voatondro ho nitarika sy nandrisika ny olona nifanan­drina tamin’ny mpitandro filaminana tonga teny an-toerana. Vao manomboka mihitsy izao ny famotorana sy ny fanadihadiana rehetra. Tsy mbola nisy ny fisamborana olona hafa», hoy ny zandary eny Fiadanana. Kasaina hoentina eny amin’ny Fitsa­rana izy ireo amin’ny alatsinainy.
Hanambatra ny heriny ireo kaominina efatra voakasika
Hihamafy ny hetsika hataon’ireo mponina voa­kasiky ny fanorenana ny tanàn-dehibe Tanà-Masoandro. Hitambatra eny Ambohitrimanjaka ireo kaominina efatra hijoro hanohitra an’ity tetikasa ity, anio, dia ny kaominina Ambohitrimanjaka, Ambohidrapeto, Ankadimanga ary Fiombonana.
Milaza ny hanaitra ny fitondram-panjakana izy ireo amin’ ny tsy mahamety ny fananganana ny tanàna vaovao, eny amin’ireo faritra ireo.
“Hitolona am-panajana sy am-pahamendrehana izahay fa tsy sanatria hanimba fananan’olona. Ny Filohan’ny Repoblika mihitsy no tadia­vinay hifampiresaka aminay. Tsy mandray vola izahay fa ny taninay no arovanay. Mivelona amin’io tanimbary io daholo ny mponina”, hoy ny solontenan’ny mponina.
Nisy kosa ny hetsika nataon’ ny mponina, teny Ambohi­drapeto, omaly taorian’ny zava-nitranga teny Ambohitrimanjaka , tamin’ny alakamisy hariva lasa teo. Manana ny fitarainany ihany koa izy.
“Malahelo izahay vaho­aka an’Ankadimanga satria samy Malagasy no mifamono amin’izao fotoana izao. Tao anatin’ny fampielezan-kevitry ny Filoham-pirenena ny hano­renana ny Tanà-Masoandro fa tsy notononiny ny toerana misy azy. Taty aoriana anefa nilaza fa eo anelanelan’Ambohitrimanjaka sy Ankadimanga no haorina izany tanàna vaovao izany. Tsy nisy akory ny tapaka taorian’ny fidinana ifotony nataon’ireo tompon’andraikitra. Mandà tanteraka ny fanorenana ny Tanà-Masoandro ny vahoakan’ Ankadimanga”, araka ny nambaran’ny raiamandreny, eny an-toerana.
Efa tamin’ny volana jona no nanomboka nanangona sonia ireo mponina amin’ny fandavana ny fanotorana tany sy ny fandravana tanàna.
“Tamin’ny 27 jona 2019 no nalefan’ny distrikan’Ambohidratrimo teto amin’ny kaominina ny taratasy mirakitra ny fitarainan’ny mponina. Mahatratra 99% no tsy manaiky an’io tetikasa io. Tsy nisy fangatahana ny fanaovana an’ireny hetsika ireny fa ny mponina no nifampitarika”, hoy Ramanasinjatomanana Ainasolo Eonydson, Ben’ny tanàna mpisolo toerana ao Ambohitrimanjaka.
Nohamafisiny fa ny fiaro­vana ny fitohizan’ny fototry ny fivelomany no mahatonga an’ireo mponina ireo hano­hitra. Anatin’izany ny fambo­lem-bary, fiompiana trondro, gana sy gisa ary ny fanaovana biriky.
Nilamina ny teny an-toerana, omaly saingy feno mpitandro filaminana nane­rana ny tanàna.
Miantso fampiatoana ny fanombohan’ny asa ny mpiaro ny zon’olombelona
Nanambatra ny feony tao anatina fanambaràna iombonana, omaly, teny Ampefiloha, ny filohana andrimpanjakana sy rafi-panjakana eto amin’ny firenena. Mbola tohin’ilay fihe­tsiketsehana nitranga teny Ambohitrimanjaka tamin’ny alakamisy hariva teo ihany no anton’izany, raha ny voalazan-dRakotovao Rivo, filohan’ny Antenimierandoholona; Maka Alphonse, filohan’ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (CFM), Rabenoro Mireille, filohan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena momba ny zon’olombelona (CNIDH) ary Navony Pierre Lenoble avy amin’ny Filankevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna ary ny zon’olombelona (HCDDED). Nasongadin’izy ireo tamin’ izany fa « tokony haato aloha ny fanombohana ny asa ary miantso ihany koa ny vahoaka hampiato ny fihetsike­tsehana ka hifanatona ».
Vahaolana maharitra no kendren’ireto filohana andrimpanjakana sy rafi-panjakana ireto. Ny fifampidinihana hoentina handaminana ny disadisa misy eo amin’ny fanjakana sy ny mponina amin’ireo kaominina voakasiky ny tetikasa no naroson’izy ireo. “Tsy ho hita ao anaty savorovoro sy fifandranitana izany vahaolana izany”, raha ny fanambaràna nataon’izy ireo ihany.
Manameloka ny fihetsik’ireo mpitandro filaminana ny OJM sy Crimad
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny Holafitry ny mpanao gazety (OJM) sy ny Fikambanan’ireo mpaka sary an-gazety (Crimad), taorian’ny savorovoro nisy tamin’ny mpanao gazety sy ny zandary, teny Ambohitrimanjaka, afak’omaly alina.
Nanao fanambaràna tetsy amin’ny foiben’ny Crimad, tetsy Analakely, ny filohan’ireto fikambanana roa ireto, Rakotonirina Gérard (OJM) sy Rakotondrazaka Hery (Crimad), omaly. Nomelohin’izy ireo sady nolazainy fa fanohintohinana ny asa fanaovan-gazety ny fihetsika nataon’ireo mpitandro filaminana, izay naka an-keriny ny fitaovan’ireo mpanao gazety sady nanositosika azy ireo.
“Fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety ny fihetsik’ireo mpitandro filaminana ireo. Tsy vitan’ny naka an-keriny ny fitaovan’ireo mpaka sary sy namafa ny sary azo ry zareo fa mbola nanositosika ihany koa. Samy manao ny asany isika ka aoka tsy hifanakatsakana fa hifanaja”, hoy izy ireo.
Ankoatra izay, naneho ny heviny nanoloana ity zava-nitranga ity ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazaka Lalatiana. “Tsy tokony hisy fanohintohinana ny mpanao gazety manao ny asany mihitsy ataon’ny zandary. Ny fiarovana mafy azy ireo eo am-panatanterahana ny asany izay asa masina aza no tokony hatao”, hoy ny fanambaràna nataony tao amin’ny tambazotran-tserasera Facebook, omaly.
20/10/2019 à 08:37
Raha iny tranga iny no jerevana dia tsy fahafehezana asa avy amin’ny zandary no azo ilazana azy. Fisamborana olona tsy mifandraika amin’ny zavaniseho. Io no tena antony voalohany nampirogatra ny olona. Asa raha mba misy ihany ny olona manampahaizana ao anatin’io rafitra io na dia ny fisehosehoana no be dia be ? Hany ka manaonao foana toy izao. Mankahery ny mpanao gazety hijoro hatramin’ny farany satria na izany fankana ankeriny fitaovan’ny mpanao gazety izany fotsiny aza dia tena tsy fahafehezana asa tsotra izao…
Fitsirihana nataon’ny Jirama :: Mpiasam-panjakana ambony tratra nangalatra herinaratra
Tontolo iainana :: Miakatra hatrany ny tahan’ny rivotra maloto eto an-drenivohitra